Nagu saabsan | Anping County Kaixuan ahama Steel Products Co., Ltd.
KX Co. (Anping KaiXuan waxyaabaha biraha ahama co., Ltd.) Waxaa la aasaasay sanadkii 2002.
Hadda shirkaddu waxay mideyneysaa soo saarista wax soo saarka horumarinta iyo adeegyada iibka, oo ku takhasusay soo saarida qalabka birta birta ah, fiilooyinka tuubada, qalabka saxaafadda, iyo qaababka kala duwan ee gaarka loo leeyahay.
Madaxbanaanida & Hal-abuurka
Ku qalabeysan yahay qalab tijaabo ah oo qalabka wax lagu baaro -beegtrometer
Qalabka ceyriinka ayaa la tijaabin doonaa ka hor inta aan la shubin iyo ka dib si loo hubiyo heerka 100% ee u qalma oo si buuxda u buuxiya heerarka maaddada ee ay u baahan yihiin macaamiisha.
Halkan waxaa ah 35 nooc oo mashiinnada mashiinnada CNC ah, 2 nooc oo mashiinno taabasho ah, qalabka cabbiraadda xagalka, mashiinka isku-dhafan ee mashiinka, iyo qalab kale oo xirfad leh. Waxaan u adeegsanaa aaladaha lagu cabbiro dunta OSG Japanese brand iyo JBO European brand si aan u tijaabino dunta si aan ula kulanno shuruudaha macaamiisha.
Kooxda QC-da xirfadleyda ah ayaa tijaabin doonta cabir kasta, daaweynta dusha sare, cilladaha qashinka adag iyo wixii la mid ah.
Shirkaddu waxay leedahay nidaamyo dhowrista deegaanka iyo habka dhoofinta.
Iyadoo loo marayo bogga rasmiga ah, Alibaba, Facebook, Linkedin, Google, iyo kanaalada kale, waxay ka kooban yihiin shabakad iibin xoog leh.
Maanta, waxsoosaarkeenna waxaa loo iibgeeyay Jabbaan, Yurub, Ameerika, iwm. 21 dal iyo gobollo adduunka ah.
Waxaa si weyn loogu isticmaalay 16 wershadood oo sameysanaya sumcad isticmaale wanaagsan.
Our warshad daboolayaa aag 20000 mitir murabac ah.
Aqoon isweydaarsiga shubista ee 5000 mitir murabac.
Aqoon isweydaarsiga makiinadda ee mitirka laba jibbaaran ee 5000.
Qalabka kormeerka xirfadeed, koox farsamo khibrad leh, taageero wax soo saar xoog leh, KX (KaiXuan), doorashadaada tayada.